Unxibelelwano 'IHybrid Calling System = Iyamangalisa | Martech Zone
NgoLwesibini, Matshi 24, 2009 NgeCawa, ngo-Epreli 24, 2016 Douglas Karr
NgoMvulo, ndafumana ithuba lokutyelela Ukusebenzisana, mamela kwaye uqaphele inkqubo yabo isebenza, kwaye usebenzise umboniso opheleleyo we-Hey Otto -ilizwi kunye nenkqubo yeenkomfa zewebhu ezisebenzisa itekhnoloji yokuNxibelelana ngasemva.
Iinkampani ezinamaziko amakhulu okufowuna ziyehla kwiindlela ezimbini ezahlukeneyo, nokuba ziinkqubo ezisebenzisa i-automation speech recognition (ASR) okanye ngokusebenzisa amagumbi amakhulu abizayo abasebenza kwiziko lokutsalela umnxeba. Ukufowuna okuqhelekileyo kwi-IVR kuyacaphukisa, kwaye ixesha lokulinda lomlindi lidla ngokuhlekisa. Ukuphathwa kwam kwezilwanyana zasekhaya kuxa nditsalela umnxeba kwinkqubo, ifuna ukuba ndicofe inombolo yam yeakhawunti, emva koko ummeli wokuxhasa abathengi (i-CSR) andibuze ukuba ndiyiphinde xa ndifumana umnxeba.
Unxibelelwano yinkqubo ye-hybrid esebenza ngokumangalisayo. Ukuba i-ASR ayinakuyiqonda impendulo, iya kudluliselwa kubahlalutyi beenjongo. Ezi ziingcali ezilawula iiakhawunti ezininzi ezithatha intetho inkqubo engenakuyazi. Isiphumo ngamava akhawulezayo ngokukhawuleza kumthengi! Endaweni yokuba uphinde amaxesha ama-3 kwaye emva koko usilele ukukubamba ubambe… abaHlalutyi beNjongo bamamele umyalezo wakho kwaye bawukhokele ngokufanelekileyo.
Andikwazi kungena kwiinkcukacha, kodwa inkqubo yokuhamba kunye nolawulo lwabahlalutyi beenjongo ziya kuyibetha ingqondo yakho. Isebenza ngokufanelekileyo, ineetshekhi zokuqinisekisa, kunye namaxesha okuphendula ngokukhawuleza. Amaziko okutsalela umnxeba anokusebenza neqhekeza lezixhobo kwaye asebenze ngokuthe kratya kwiminxeba… ngelixa eqinisekisa ukuchaneka nokuphucula ukwaneliseka kwabathengi. Cofa uze ungayiboni ifayile ye- Hey Otto ividiyo.
U-Hey Otto lilizwi, iwebhu kunye nesicelo esidityanisiweyo sokudibana. Jonga ividiyo kwezinye zeendlela eziphambili ze-Hey Otto, njengokumemeza kuka-Otto kumntu oza kubakho okanye ukuhambisa umnxeba wakho wenkomfa ukusuka kwifowuni ukuya kwenye-ngaphandle kwabahambi bengazange bakuqonde oko!
tags: asrcsrhey ottoAbahlalutyi beenjongoukusebenzisanaIVR
Mar 24, 2009 ngo 10:27 PM
Andiqondi ukuba okumangalisayo kwenza ubulungisa kunxibelelwano lwenkqubo. Unxibelelwano kukutsiba okuya phambili kwitekhnoloji yeziko lokufowuna kunye nokudibanisa iinkqubo zabantu kunye netekhnoloji. Nayiphi na inkampani eneziko elikhulu lokufowuna kufuneka iphonononge isebenzisa le nkqubo.
Mar 25, 2009 ngo-9: 43 AM
Ndikhe ndafumana ubuchwephesha bokunxibelelana kwitekhnoloji ngaphambili (i-HotBox pizza yandikhupha okokuqala xa ndiyisebenzisa), kodwa inkomfa ibonakala njengesicelo esimangalisayo samava omsebenzisi omangalisayo. Akukho UI njengelizwi lomntu!
Mar 25, 2009 ngo-9: 46 AM
Ndikhe ndafumana ukubonwa kwenkqubo yokuNxibelelana ngaphambili, ipitsa ye-HotBox indikhulule okokuqala xa ndiyisebenzisa, kodwa inkomfa ibonakala njengesicelo esimangalisayo samava omsebenzisi omangalisayo. Ndiza kusebenzisa.
Mar 25, 2009 ngo 3:02 PM
Nditsalele umnxeba kwi I-HotBox Pizza Inkqubo nayo-iyamangalisa!